RASMI: Kulamada lagu soo xirayo horyaalka La Liga xilli ciyaareedka 2019-2020 oo la shaaciyey.. (Yey ku soo xiran doonaan Atletico, Real iyo Barca?) – Gool FM
(Madrid) 04 Luulyo 2019. Xiriirka kubadda cagta dalka Spain ayaa maanta soo saaray isku aadka Jadwalka kulamada horyaalka La Liga xilli ciyaareedka cusub ee 2019-2020, iyadoo haatan la ogaaday koox weliba kulanka ay ku soo gabagabaynayso horyaalka.
Macallin Zidane ayaa xilli ciyaareedkiisa 2019-2020 ee Real Madrid horyaalka La Liga ku soo xiran doona kulan ay marti u noqon doonto naadiga Leganés.
Kooxda Barcelona ayaa xilli ciyaareedka ee 2019-20 horyaalka La Liga ku soo gabagabayn doonta kulan ay marti u noqon doonto kooxda Deportivo Alaves waxayna tani la micno tahay in kooxda Valverde ay marti ku bilaaban doonto isla markaana ay marti xili ciyaareedka cusub ku soo xiran doonto.
Naadiga Atletico Madrid ayaa kulankeeda ugu dambeeya horyaalka ku soo xiran doonta kulan ay soo dhoweynayaan Real Sociedad, taasoo ka dhigan inay Atletico ay kulanka furitaanka horyaalka iyo kan xiritaankaba ku ciyaari doonto garoonkeeda Wanda ee lagaha badan lagu dhisay.
Haddaba halkaan hoose ka eeg kulammada maalinta ugu dambeysa ee xiritaanka horyaalka La Liga xilli ciyaareedka 2019-2020, kuwaasoo la ciyaari doono 24/05/2020:-